Soomaaliya oo ku guuleysatay In xayiraada laga qaado xoolihii loo dhoofin jiray Sacuudiga. - Latest News Updates
Soomaaliya oo ku guuleysatay In xayiraada laga qaado xoolihii loo dhoofin jiray Sacuudiga.
Muqdisho:-Wasiirka Xanaanada Xoolaha dhirta iyo Daaqa XFS mudane Xuseen Maxamuud Sheekh Xuseen oo shir jaraaid u qabtay Warbaahinta ayaa shaaciyay In xukuumadda Soomaaliya ay muddo Lix sano ah kadib ku guuleysatay In xayiraada laga qaado xoolihii loo dhoofin jiray Suuqyada dalka Boqortooyada Sacuudiga.
, Wasiirku wuxuu intaa ku daray in dhawaan dalkaas loo dhoofin doono 600,000 oo neef oo ari ah iyo 100,00 kun neef oo geel ah.
Halkan ka akhriso: Warsaxaafadeedka
SHIR JARAAID Dhoofka Xoolaha ee Sacuudiga